माया गर्छु भन्दै कल्पनाको नजिक गएका प्रदिप तर्सेपछि के भयो ? (हेर्नुस् भिडियो) – Tufan Media News
माया गर्छु भन्दै कल्पनाको नजिक गएका प्रदिप तर्सेपछि के भयो ? (हेर्नुस् भिडियो)
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार १४:१५
पछिल्लो समयमा निकै नै चिनिएको जोडी कल्पना दाहाल र प्रदिप रोका अहिले इन्द्रेणी मा धमाका मच्याई रहेका छन्।
दोहोरि च्याम्पियन बि’बाद पछि झनै चिनिएका प्रदिप रोका अहिले कल्पना संग दोहोरि मा भिडेका छन्। जुबाई जनाले धेरै मिठो गीत गायर सबैलाई रमाइलो गराएका छन्।
नेपाल टेलिभिजनद्धारा प्रशारण हुने नेपालकै पहिलो दोहोरी प्रतियोगीता स’म्बन्धी टेलिभिजन सो दोहोरी च्याम्पिएनको तेस्रो एपिसोड कल्पना दाहालले जितेकी छिन् ।
केही समय अगाडी देखि सुरु भएको दोहोरी च्याम्पिएनको शनिवार भएको प्रतियोगीतामा कल्पना दाहाल समुहले जीत हासिल गरेको हो । कल्पना दाहाल र प्रदिप रोक्का तथा लक्ष्मी बस्नेत र विक्रम बाबु विश्वकर्माबीच भएको प्रतियोगीतामा कल्पना दाहाल समुहले जीत हासिल गरेको हो ।
हरेक हप्ताको शनिवार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो ऐपिसोड जजका कारण विवा’दमा परेको थियो ।
कल्पना दाहाललाई जज चन्द्र शर्माले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएपछि वि’वादमा परेको थियो । शुरुको ऐपिसोडमा न’कारात्मक कमेन्ट पाएको च्याम्पियनका जजहरु अहिले भने सु’ध्रिएको प्रतिक्रिया दर्शकहरुले दिईरहेका छन् । च्याम्पियनले तेस्रो भाग प्र’शारण गरेको छ ।